Uru nke njikọ na Influencer | Martech Zone
Anyị na-aga n'ihu na-agba mgba n'etiti ụlọ ọrụ ndị nwere mmetụta na ọnụọgụ ihe efu na ọnụ ọgụgụ dị elu. M na-akatọ ụlọ ọrụ ahụ kemgbe mmalite ya na mgbasa ozi mmekọrịta nke ọtụtụ metrics na nyiwe anaghị atụ mmetụta, nanị ihe ha na-atụle nha netwọk ahụ, nke ndị na-ege ntị, ma ọ bụ nke obodo.
Mụ onwe m nwere nnukwu netwọkụ… nke mere na ọ na - abụkarị onye isi ike na ọ na - esiri m ike ịme ezigbo mmekọrịta mụ na ọtụtụ ndị m na - asọpụrụ. Ka oge na-aga, ndị mmadụ na ụlọ ọrụ na-agagharị na nlebara anya ka anyị na-elebara azụmahịa anya. Oge ụfọdụ anyị na-ejigharị ebumnuche ka m na-achọ ha dị ka akụ tụkwasịrị obi na isiokwu m na-enweghị ahụmịhe na ya. N'oge ndị ọzọ, enwere m ike ịnọ na ọgbakọ ma ọ bụ ihe omume ma ha na-anọ ebe ahụ ma anyị na-agbanyeghachi mmekọrịta anyị.
N'ime netwọkụ m, oge ụfọdụ m mmetụta ịzụta mkpebi maka ụfọdụ ndị na jikọọ ma ọ bụ soro m… ma na ọnụ ọgụgụ bụ n'ezie ezi ala. Enwere m ndị ahịa ole na ole na-atụkwasị m obi kpam kpam na enwere m ike ịme mkpebi maka ha. Enwere m ndị ọzọ nọ na netwọkụ m ruru ma kwuo na m nyere aka na-aga n'ihu na ikpo okwu na atụmatụ na-enweghị itinye aka na ya. Ma mgbe ahụ, enwere m ụfọdụ ndị na-eche nche nke m metụta mana anaghị akọrọ nke a n'ihu ọha ma amaghị m mmetụta ahụ kpamkpam. M na-anụkarị site na ngwọta m dere banyere onye kelere m ma kwuo na ọ dugara ụfọdụ ụlọ ọrụ ịmara ma ọ bụ ọbụna nnukwu onye ahịa. Ọ bụrụ na ha agwaghị m, agaghị m ama ihe ọ bụla gbasara ya.
Ọtụtụ mgbe na-emetụta mkpebi ịzụta, M jikọọ ndị mmadụ na netwọk m na ndị nke mmetụta. Dịka ọmụmaatụ, ụnyaahụ, ezutere m na ikpo okwu onye m na-etinye na onye na-emetụta mgbasa ozi na mgbasa ozi mgbasa ozi. M tụkwasịrị obi ma site na influencer na m nwere obi ike na n'elu ikpo okwu, n'ihi ya, ọ bụ oké njikọ na-eme. Ekwenyesiri m ike na ọ ga-eme ka ị mata ma nweta ego ọzọ.
Yabụ, abụ m onye na-emetụta ihe ka ọ bụ njikọta? Ọ bụ ezie na m nwere mmetụta ụfọdụ ịzụta mkpebi, ekwenyere m na m bụ nke a njikọ. Amaara m nyiwe, amaara m ndị mmadụ, Aghọtara m usoro ahụ… yabụ enwere m ike ijikọ atụmanya ziri ezi na ndị ziri ezi iji nyere ha aka ime mkpebi ịzụta ha.
Nsogbu dị na nke ahụ, n'ezie, bụ na enweghị ezigbo nkọwapụta maka nke a na ọdụ data mmekọrịta ma ọ bụ site na ikpo okwu ọ bụla. Amaara m na uru m bara - otu njikọ m mere mere ka m nweta ụlọ ọrụ. M na e tinyere aka na ihe karịrị otu ijeri dollar nke ulo oru mbo na mbụ na Martech ụlọ ọrụ. Enweela m ọtụtụ ndị ahịa na nhọrọ ndị na-ere ha… nke metụtara ọtụtụ narị nde dollar na ntinye ego.
Anaghị m ekwu nke a iji tuo ọnụ… Abụ m otu n'ime ọtụtụ mmadụ na otu ndị a na-enyere aka ịchụ mkpebi nzụọ ahịa. Anọ m na-eme nke a kemgbe iri afọ ole na ole ka m wee nọrọ gburugburu ebe ahụ oge ole na ole ma mara ihe m na-eme. Abụ m ezigbo njikọ.
Njikọ vesos Influencers
Ka m garuo isi. Anyị na - agbagha mmetụta na njikọta yana ọ na - eweta nsogbu abụọ dị iche iche:
Ndị na-emetụta ya bụ ụfọdụ njikọta mgbe ụfọdụ - enwere ụlọ ọrụ na-achọ ndị dị ka m onwe m nwere ndị na-eso ụzọ na ụlọ ọrụ ma ọ bụ mpaghara. Mgbe ụfọdụ ọ na - emetụta ya, oge ndị ọzọ a na - ahụta ya dị ka obere mmetụta (ọ bụrụ na ọnụọgụ pere mpe ma isiokwu a dị niche). Ma ikekwe ha adịghị emetụta zuo mkpebi decision ha na-na na na ihe ịrịba njikọ. Ndị ụlọ ọrụ na-enwe mmechuihu na itinye ego ndị a… ebe ha nwere ike ha agaghị enweta nsonaazụ nnata ego a tụrụ anya ya.
Njikọ nwere ịrịba uru dị ka nke ọma - enwere ndị nwere netwọkụ buru ibu n'ịntanetị bụ akụ dị egwu iji nyere aka jikọọ ntụpọ - site na ndị na-etinye ego, na nyiwe, na ndị ahịa - mana enweghi ụzọ iji kwupụta uru ọ bụla na njikọ ndị ahụ. Ọ bụrụ, dịka ọmụmaatụ, egosiri m ụlọ ọrụ gị na onye na-emetụta ihe ọ bụla ma tinye ego na mmekọrịta ahụ… nke nwere ike iduga nganga na-aga nke ọma… na ego ọ bụla ga-abụ (nke ziri ezi) na-emetụta ya. Otú ọ dị, na-enweghị njikọ ọ gaara eme ma ọlị.
Dị ka onye na-azụ ahịa m na ihe ọmụma banyere ụlọ ọrụ m ma nwee nnukwu ego na netwọkụ m, ana m agbasi mbọ ike na ike m nwere. Kedu ka ị si eche echiche ịbụ a njikọ? Offọdụ n'ime ndị ahịa m na-amata uru ahụ mgbe anyị nwesịrị mmekọrịta ogologo oge ma ha achọpụtala nsonaazụ mgbada.
Ọtụtụ nyiwe ndị ọzọ na-abịakwute m na-achọ nsonaazụ ozugbo. M setịpụrụ atụmanya ndị kasị mma m nwere ike na-ere ha ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ abụghị ndị kasị baa uru akpan owo na m na-ewetara… ha na-ahapụ mgbe wetere ọ bụla njikọ aka m. Hụ nwere, ọ bụ ihe na-akụda… ma m na-aghọta nsogbu ha n'okpuru na ihe isi ike na-enye uru na mmekọrịta.
Mgbe ị na-ahụ ọnụ ọgụgụ buru ibu, ị nwere ike ịnwa iku onye nwere nọmba ndị ahụ dị ka onye influencer. Naanị buru n'uche na uru ọnụọgụgụ ọnụọgụ ọnụọgụ ahụ wetara nwere ike ọ gaghị mọbụ ire ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị… ọ nwere ike ịbụ njikọta ha wetara gị.
Tags: njikọLaghachi na Mmetụtaịkparịta ụka n'socialntanet
Ngosipụta abụghị otu ihe ahụ Mmetụta: Oge eruola ka ị kwụsị iji akara iji tụọ uru